Faah-faahin ku saabsan qaraxii maanta ka dhacay Muqdisho iyo Wararkii ugu dambeeyay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Faah-faahin ku saabsan qaraxii maanta ka dhacay Muqdisho iyo Wararkii ugu dambeeyay
Faah-faahin ku saabsan qaraxii maanta ka dhacay Muqdisho iyo Wararkii ugu dambeeyay
Muqdisho (Halqaran.com) – Waxaa faah-faahin dheeraad ah ka soo baxaya qarax gaari loo adeegsaday oo maanta ka dhacay Koontaroolka Sayidka oo ay ku sugan yihiin Ciidamada Koofi gaduuda Madaxtooyadda Villa Soomaaliya.
Gaarigaan qarxay ayaa wuxuu soo istaagay goob Baabuurta la istaajiyo, xilliyada ay doonayaan inay u gudbaan dhanka Madaxtooyadda, halkaasi oo qofka gaariga wado uu ku dago, kadibna Aqoonsiga dowladeed uu u geeyo Askarta.
Xilliga qaraxa dhacaayay waxaa goobtaasi taagnaay gaadiid ay wataan Shaqaalaha dowladda, waxaana mar kaliya la maqlay Qaraxa gaariga.
Inkastoo wali aanan si rasmi ah loo ogayn khasaaraha dhimashada iyo midka dhaawaca ah ee ka dhashay Qaraxaasi, ayaa haddana muuqaalo la soo duubay, waxaa laga dhex arkaayay gaadiid meesha ku gubanaya.
Gaadiidka gurmadka deg dega oo gaaray goobta, ayaa lagu soo warramayaa inay halkaasi ka qaadeen dhaawacyo kala duwan oo ka dhashay Qaraxaasi, waxaana ay geeyeen goobaha Caafimaadka.
Ciidamada Booliska iyo kuwa Koofi gaduuda ayaa xiray goobta Qaraxa uu ka dhacay, waxaana socda Baaritaanka Qaraxii dhacay.
Isgoyska Sayidka ayaa dhawaan lagu xiray Kaamirada Qarsoon ee muuqaalada duubta, waxaana suuragal ah in Kaamirada laga helo muuqaalka gaariga qarxay.
Faahfaahin ku saabsan qarax maanta ka dhacay Muqdisho